Ny Semalt Expert dia mamaritra ny fomba handoavana ny sazy ara-panadinana amin'ny Google Analytics
Raha hitanao fa ny tranonkala dia mahazo traikefa be dia be ary ny angon-drakitra hita ao amin'ny Google Analytics dia tsy irery ianao fa maro ny olona no miatrika ilay olana. Ny ankamaroan'ny fifamoivoizana dia manjavozavo ary tokony hovahana haingana araka izay azo atao. Ny savorovoro vaovao momba ny fitsaboana dia manimba ny angona ao amin'ny Google Analytics amin'ny ankapobeny. Ireo mpanafika dia tsy manimba fotsiny ny sangan'asanao ao amin'ny valin'ny fikarohana , fa koa manana ny laharana tsaratsara kokoa ho an'ny tranonkalany sy ny bilaoginy. Ny olana dia hoe ny fivoaran'ny orinasam-barotra madinika amin'ny spam referral sy hampitombo ny isan'ireo fomba fijery ao amin'ny tranokalany.
I Ivan Konovalov, Tale Mpitantana Success of Semalt , dia manome vahaolana sarobidy momba ny spam referral
Namorona spam tao amin'ny Google Analytics ny mpamaky
Ny fanontaniana voalohany manapotika ny saintsika dia ny antony mahatonga ireo mpanafika sy hackers hamorona spam Google Analytics? Mijery maso ny Google Analytics ny tompona tranonkala sy bilaogera ary manova ny fandehany indray mandeha indray mandeha. Manala sy manakana ny adiresy IP izay mampiahiahy ary manakana ny tena olona tsy hitsidika pejy web. Ny maro amin'ireo hackers dia mampiasa spam referral amin'ny famokarana sy fanofanana mivarotra. Plus, ampiasainy izany hanaparitaka viriosy sy malware ary hitarika fanafihana phishing isan'andro. Raha toa ka mahita vohikala ahiahiana ao amin'ny antontan-taratasinao ianao, dia tsy tokony hotsikao na oviana na oviana io tranonkala io ary alefao amin'ny Google Analytics faran'izay haingana..
Ahoana no mitrandraka spam?
Nandritra ny fandehan'ny fotoana dia nampiditra vokatra sy serivisy maro i Google mba hiantohana ny fiarovana sy ny filaminana an-tserasera. Azonao atao ny mampiasa ny endri-tsainy sy ny safidy mba hitazonana ny tranokalanao voaro amin'ny hackers. Azo atao amin'ny tarehimarika miavaka amin'ny fananana rehetra ny fanaraha-maso. Ny fananana iray dia midika fa afaka mampiasa laharana laharana iray ianao na code mba hahalalany raha mahazo fahazoan-dalana ara-dalàna ianao na tsia.
Ny Google Analytics dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa kaonty miisa dimampolo isaky ny kaonty. Midika izany raha manana anao AdSense ianao, tokony hahazo nomerao nomerao isaky ny fananana. Ny laharana UA, izay midika hoe Urchin Analytics, dia ny anaran'ny vokatra Google efa nahazo taona ho an'ireo mpampiasa azy. Ny tarehimarika afovoany dia ny kaonty tena ilaina tokony hampiasainao rehefa mamorona trano iray. Ny toetra rehetra ao amin'ny kaonty Google Analytics dia afaka mizara ny isa mitovy ihany koa.
Ny Google Analytics ihany koa dia manome safidy amin'ny sivana. Tsotra fotsiny ny mamorona sivana ary manavao ny votoatin'ny Analytic toy ny fironana vaovao sy tetika. Betsaka ny toro-làlana sy toro-làlana azo jerena ao amin'ny aterineto noho ny fanesorana spam referral. Azonao atao ny mihazona ny kalitaon'ny rakitrao ao amin'ny Google Analytics amin'ny fanitsiana ny fanovana Source .